Football Heroes PRO 2017 APK အားဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘောလုံးသူရဲကောင်းများ 2017 Pro
ဘောလုံးသူရဲကောင်းများ 2017 APK ကို Pro
NFL ကစားသမားများအသင်းနှင့် Run ကိုဂိမ်းများဝဠာ၌သငျအခက်ခဲဆုံး-ရိုက်ပုတ်တဲ့ဂိမ်းဆောင်ကြဉ်း - ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသူရဲကောင်းများ PRO 2017 ။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းသားအမေရိကန်ပေါ်မှာရှိသမျှ action ကိုထိန်းချုပ်ပါနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု, အဆငျ့အထိတပ်များနှင့်နေအိမ်ဟာအနိုင်ရရှိရောက်စေဖို့ကျွမ်းကျင်မှု, မဟာဗျူဟာနှင့်အထူးရွေ့လျားသုံးပြီးအဆုံးဇုန်ရန်သင့်လမ်းကိုစစ်တိုက်ခြင်း။ သင်အကြိုက်ဆုံး NFL ကစားသမားရေးဆွဲခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်ဘောလုံးအသင်းတည်ဆောက်။ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲနောက်သို့ IS!
"Arcade ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၏ပြန်သွား" - ဂိမ်း Information
"ဘောလုံးသူရဲကောင်းများဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမရှိဘဲ app store ကိုအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးအမေရိကန်အားကစားပုံဖော်ခြင်းဖြစ်၏။ " - Touch ကို Arcade
2016 - 2017 NFL ကစားသမား
အဆိုပါ 2000 လူသစ်အပါအဝင် -> + 2016 ကျော်တက်ကြွ NFL ကစားသမားအနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုကစားသမားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူးစွမ်းရည်, attribute တွေနှင့်ကစားသမားဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိပါတယ်။
> လူကြိုက်များဝယ်လိုအားအားဖြင့်ကျနော်တို့ဘောလုံးသူရဲကောင်းများ PRO 2017 ထံမှစာချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာသင့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကုန်ကျမရှိတော့ဖြစ်တယ်, ဒါကုန်းပတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံး NFL ကစားသမားဝယ်ယူပေါ်တွင်သင်၏ဒင်္ဂါးပြားသုံးဖြုန်း!
> သင့်ရဲ့လိဂ်ဂိမ်းအတွက်ကြီးမားသောအနိုင်ရရှိမှုများနှင့်လျင်မြန်စွာလာမည့်စိန်ခေါ်မှုပေါ်သို့ရွှေ့ဖို့လိုသလား? ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အဖွဲ့ကစည်းမျဉ်းသားအမေရိကန်လွှမ်းမိုးစောင့်ကြည့်ဖို့လိုသလား? တဦးတည်းထိတွေ့နှင့်အတူ Play အော်တိုအပေါ် Turn နှင့်သင့် AI အနည်းပြအားလုံး action ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့တောင်းဆို play ပါလိမ့်မယ်။
> အောင်မြင်ပြီးဘောလုံးယခုဂိမ်းကိုပိုပြီးပြောင်းလဲနေသောနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အောင်, အသံဖမ်းခြင်းဖြင့်ဖမ်းမိသို့မဟုတ်ပင်ကြားဖြတ်ခံရဖို့တင်ရန်နိုင်ပါသည်။
> တန်ဖိုးရှိတဲ့အကြွေစေ့ဆုလာဘ်, မြှင့်တင်ရန်, ပြဇာတ်နှင့်ကစားသမားကတ်များအဘို့အသီးအသီးသောနေ့၌ Log!
> ကွဲပြားခြားနားသော lineup နှင့်မဟာဗျူဟာနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့မျိုးစုံအဖွဲ့များအကြား Build နှင့် switch သည်။
> ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအွန်လိုင်း multiplayer အတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကစားသမားအပေါ်ကိုယူသွားပါ! မိဿဟာ join နှင့်အဖွဲ့ချုပ်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများဖြစ်လာမှတက်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်။ ထိုကဲ့သို့သောကစားသမားကုန်းပတ်, ဒင်္ဂါးပြားနဲ့ပိုပြီးအဖြစ်ဆုလာဘ်အနိုင်ရ!
> ရိုးရှင်းသော touchscreen ကထိန်းချုပ်မှုကိုသင်လယ်ကွင်းပေါ်မှာအားလုံး action ကိုထိန်းချုပ်ပါစေ: run ရှောက်သွား, လှည့်ဖျားခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ် - သင့်လက်ချောင်းထိပ်များထိတွေ့မှာအားလုံး။
စိန်ခေါ်မှုများ GAME Mode
ပိုပြီးပြန်လာမယ့်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်ကြောင်း> ဂိမ်းသည် Modes: NEW 2017 ဖလား Mode ကိုအမြန်ပွဲစဉ်, ရုတ်တရက်သေမင်း, အကြွေစေ့တိုက်ပွဲနှင့်အဖွဲ့ချုပ် Mode ကို!
> Wi-Fi ကိုကျော်ဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကို Play ။
> ယူ. နှင့်အမှတ်ပေး touchdowns အောင်, 'passes ဖမ်းခြင်းအားဖြင့်သင့်ကစားသမား' 'စွမ်းရည်ကိုတိုးပှား။
သင့်တွင် TEAM Manage
> သင်အကြိုက်ဆုံး NFL ကစားသမားအတွက် Sub နှင့်အန္တိမစိတ်ကူးယဉ်ဘောလုံးအသင်းကိုတည်ဆောက်စေ။
> တစ်ဦးလိုဂို Upload လုပ်ပါသို့မဟုတ်သင့်အဖွဲ့သည်အရောင်များ, မြို့နာမည်ပြောင်းပေးပါ။
> တစ်ခုချင်းစီကစားသမားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့လာပါတယ်။ ထုံးစံအနုပညာနှင့်အတူရှားပါးကတ်များအဘို့မျက်စိထွက် Keep!
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် SUPER ရွှေ့
> Fumble အပါအဝင် 50 မယုံနိုင်စရာရွေ့လျားကျော်, မီးသတ် Pass ကို, ပါဝါ Push ကိုကိုင်တွယ်အာရုံနှင့်များစွာသောပိုပြီး!
cross-DEVICE ကို PLAY
> Cross-device ကိုထပ်တူပြုခြင်း: သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာတူညီတဲ့အသင်းများနှင့်အတူကစား။
ဒီ app in-app ဝယ်ယူမှုပေးထားပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကို အသုံးပြု. In-app ကိုဝယ်ယူမှုကန့်သတ်ရန်လိမ့်မည်။
ဘောလုံးသူရဲကောင်းများ၏ယခုပင်လျှင်ပရိတ်သတ်? ကျွန်တော်တို့ကို Facebook ပေါ်တွင်နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုကျနာကဲ့သို့ပင်:
2016 Run ကိုဂိမ်းများ LLC ©။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
© 2016 NFL ကစားသမားထည့်သွင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ဘောလုံးHeroes® Run ကိုဂိမ်းများ LLC ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
ဒီထုတ်ကုန်ဟာ OpenSSL ကို Toolkit တွင်အသုံးပြုမှုအတွက် OpenSSL Project မှတီထွင် software ကိုပါဝင်သည်။ (http://www.openssl.org/) ။
ဒီထုတ်ကုန်အဲရစ်လူငယ် (eay@cryptsoft.com) ကရေးသား cryptographic ဆော့ဖျဝဲပါဝင်သည်။
တည်ငြိမ်မှုနှင့် multiplayer မှ> တိုးတက်မှု
92.50 ကို MB